Shabaab oo sheegtay inay gacanta ku dhigeen Diyaarad Drone – STAR FM SOMALIA
Shabaab oo sheegtay inay gacanta ku dhigeen Diyaarad Drone
Ururka Al Shabaab ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigeen Diyaarad nooca wax basaas oo ay leedahay Dowladda Mareykanka, taasi oo ku soo dhacday deegaan ku yaallo Duleedka Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada hoose.
Deegaanka Qudus oo Qiyaastii 45-KM u jirta Magaalada Kismaayo ayeey sheegeen Shabaab inay ku soo dhacday Diyaaradan oo nooceeda uu yahay Drone kana soo duushay Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Kismaayo oo Saldhig Milatiri ay ku leeyihiin ciidamada Mareykanka.
Shabaabka waxa ay sheegeen Diyaaradan inay ku xiran yihiin Kaamirooyinka wax basaasa ee xogta iyo macluumaadka u gudbiya Mareykanka.
Ururka Al Shabaab ayaa sheegtay Diyaarada oo aanan si aad ah u bur burin inay qabteen ciidamada Ururka Al Shabaab, ayna ula dhaqaaqeen deegaan aysan sheegin magaciisa oo ay ku hayaan.
Dhowr mar ayaa Al Shabaab waxa ay qabteen Diyaarado Drone ah oo soo dhacday, kuwaasi ay ku soo bandhigeen deeganada Ururka Al Shabaab ay gacanta ku hayaan.
Mareykanka ilaa hada kama aysan hadlin Diyaaradan Drone-ka ah ee ku soo dhacday Deegaanka Qudus ee Gobolka Jubbada hoose, xilli ay dul wareegeysay deegaanka Qudus oo Shabaab ay ku sugan yihiin.